०७७ वैशाख ०९ गते मंगलबार ई. स. २०२० अप्रिल २१ तारिख, हेर्नुहोस राशिअनुसार तपाईंको भाग्य – Everest Pati
०७७ वैशाख ०९ गते मंगलबार ई. स. २०२० अप्रिल २१ तारिख, हेर्नुहोस राशिअनुसार तपाईंको भाग्य
वि.सं. २०७७ वैशाख -९,मंगलवार,ई.सं.२०२० अप्रिल -२१, शक संवत्-१९४२,नेपाल संवत्-११४० चौलागा,प्रमादी संवत्सर,उत्तरायण,ऋतु-वसन्त,वैशाख कृष्णपक्ष तिथि-चतुर्दशी , २९:४१ बजे उप्रान्त औंसी,नक्षत्र-उत्तरभाद्रपदा , १०:५२ बजे उप्रान्त रेवती,योग-वैधृति , २१:५८ बजे उप्रान्त विष्कम्भ,करण-भद्रा १६:३९ बजेदेखि शकुनि , २९:४१ बजे उप्रान्त नाग,चन्द्रराशि-मीन,आनन्दादि योग-सिद्धि,सूर्योदय-०५:३५,सूर्यास्त-१८:३१,दिनमान-३२ घडी २० पला ल पञ्चक। मातातिचह्रे पूजा।
बिभिन्न स्रोत साधनको प्रयोग मार्फत मनग्गे धन तथा सम्पनि कमाई गर्न सकिनेछ । घर परिवारका ईच्छा तथा आकांक्षाहरु पुरा गर्न सकिने हुदा आफन्तहरु खुसि रहनेछन् । पढ्ने लेख्ने काममा मन जाने हुनाले नतिजा आफैतिर ल्याउन सकिनेछ । माया प्रेममा रमाउने जोडीहरुका लागी समयले साथ दिनेछ । उचित समयमा दाजुभाई तथा अग्रजबाट पाईने सहयोगले एक कदम अगाडि बढ्न सकिनेछ । साझपख सवारि साधनको प्रयोग गर्दा ख्याल गर्नुहोला ।
लगनशिल तथा मेहनेतले चाहेको उपलब्धि हासिल हुँनेछ । परिवारका साथ लामो दुरिको धार्मिक तथा शैक्षिक यात्राको प्रवल सम्भावना रहेकोछ । खोज तथा अनुशन्धानमा समय लगानि गर्नेहरुले राम्रो नतिजा हात पार्न सक्ने योग रहेकोछ । पढाई लेखाईमा अरुदिन भन्दा सुधार भएर जानेछ । कुनै पनि क्षेत्रमा आउने प्रतिष्पर्धिहरुलाई सजिलै हराउन सकिनेछ । बिहानको समय मध्ययम रहेकोले प्रेममा धोका तथा मनमुटाब बढ्ने योग रहेकोछ ।
सिंह (मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे) –
शिक्षित तथा बौद्धिक ब्याक्तित्वहरु सँग सहभागि भई आफ्नो गतिलो प्रश्तुति पस्कने अवसर प्राप्त हुनेछ भने पढाई लेखाईमा भनेजस्तो नतिजा हात लाग्नेछ । परिवार तथा दिदिबहिनिको माध्याम बाट काम बन्नेछ । व्यापार व्यावसायमा लगानि बडाउँदा राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुनेछ । आकस्मिक लाभ हुने तथा बाधा अवरोधहरु स्वत हटेर जानेछन् । साझपख समय मध्ययम रहेकोले आफन्त तथा घर परिवारका सदस्यसँग बिवाद तथा मनमुटाब सिर्जना हुनेछ ।
पढाई लेखाईमा अरुदिन भन्दा राम्रो प्रगति भएर जानेछ भने प्रतिश्पर्धामा तपाईनै अग्र पंक्तिमा आउनु हुनेछ । शैक्षिक परामर्श तथा चेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेर शिक्षाको पहुँच भन्दा बाहिरका मानिसहरुलाई शिक्षाको पहुचमा जोड्न सकिने छ । बंश बृद्धिको योग रहेको छ भने सन्तानको प्रगति देखेर मन प्रफुल्लित हुनेछ । बिहानको समय मध्ययम रहेकोले आमासँग टाडिएर यात्रा गर्नुपदा मन खिन्न हुनेछ ।
माया प्रेमको डोरो कसिलो हुँनेछ भने प्रेम प्रसङमा रमाउन चाहनेहरुका लागि समय उत्तम रहेकोछ । मध्यान्हबाट पढाइ लेखाइमा खासै मन नजादा हरुभन्दा पछि परिनेछ । व्यापार व्यावसायमा प्रशस्त समय दिएपनि आम्दानि थोरै हुनेछ भने कृषि तथा पशुपालन व्यावसायमा समय लगानि गर्नेहरुका लागि समय फलदायि रहनेछ । आफन्त तथा आमा सँग नचाहादा नचाहादै घरायसि कुरामा बिवाद सिर्जना हुनेछ ।
पढाई लेखाईमा थोरै समय दिदा पनि उत्कृष्ट नतिजा आउने हुनाले आफन्त तथा गुरुजनहरु खुसि हुनेछन् । तपाईको ईमान्दारिताको सबैले कदर गर्नेछन् भने सामाजिक कामहरु समयमा सम्पन्न हुने हुनाले मान सम्मानमा बृद्धि हुनेछ । आुफन्त तथा कुटम्बसँगको चिसिएको सम्बन्धमा सुधार भएर जाने समय रहेकोछ । व्यापार व्यावसाय बिशेष गरेर होटल तथा रेष्टुरामा गरिएको लगानिबाट मनग्गे धन आर्जन गर्न सकिनेछ । पारिवारिक सभा समारोहमा सहभागि भई स्वादिष्ट भोजनका साथ रम्न सकिनेछ ।
नयाँ नयाँ प्रेम प्रस्ताव आउँने तथा माया प्रेममा आफ्नो मायालुलाई आफ्नै आखाँको वरिपरि देख्न पाउँदा मन खुसि हुनेछ । राजनितिक सभा समारोहमा जमघट भई स्वादिष्ट भोजन ग्रहण गर्ने अवसर जुर्नेछ भने समाजमा मान सम्मान तथा ईज्जत प्रतिष्ठा बडेर जानेछ । बिहानको समय अन्यकामको लागि मध्ययम रहेकोले विदेश यात्रा तथा यात्रासँग सम्बन्धित कामको लागि उत्तम रहेकोछ ।
ब्यालेन्स न्यून भई आफन्तसँग सम्पर्क गर्न नपाएका टेलिकमका ग्राहकलाई आजबाट निशुल्क सेवा